DIB U EEGID+Paco Alcacer VS Neymar : Neymar Oo La Wareegay Rikoor Xun Ee Uu Heeystay Paco Alcacer , 796 Daqiiqo Oo Gool La’aan Ah – Kooxda.com
Home 2016 December Champions League, Dib U Eegid, Spain, Wararka Maanta DIB U EEGID+Paco Alcacer VS Neymar : Neymar Oo La Wareegay Rikoor Xun Ee Uu Heeystay Paco Alcacer , 796 Daqiiqo Oo Gool La’aan Ah
DIB U EEGID+Paco Alcacer VS Neymar : Neymar Oo La Wareegay Rikoor Xun Ee Uu Heeystay Paco Alcacer , 796 Daqiiqo Oo Gool La’aan Ah
December 21, 2016 · by	Jamuuni · 0
Weeraryahanka kooxda Barcelona Neymar ayaa xilli ciyaareedkaan moogan inuu wax badan goolal ka dhaliyo shabaqa kooxaha kale waana waqtigaasi ugu dheeraa ee uu xidigaan gool la aan ahaado.
Xidigaan ayaa kusii dhowaanayo inuu gaaro ilaa iyo 1,000 daqiiqo,waxaana ugu dambeeysey inuu kooxdiisa gool u dahaliyo bishii October taasi oo ka dhigan inuu sii marayo 796 daqiiqo oo gool la’aan ah.
Ciyaaryahankaan waxaa ugu dambeeysey inuu kooxdiisa gool u dhaliyo kulankii ay wajeheen kooxda Manchester City ,waxaana xilligaasi oo xitaa qasaariyey rigoore kooxdiisa loo dhigay.
Sidaasi darteeda wargeeyska sida weeyn kaga hadla Barcelona waxaa uu sheegay in Neymar uu marayo waqtigiisa ugu xumaa xitaa waxaa ka fiican Paco Alccacer.
Xidigaan ayaa ahaa ciyaaryahanka aan gool u dhalin Barcelona daqiiqadaha ugu badan waxaana ay ku qaadatay inuu kooxdiisa gool u dhaliyo 707 , ama 13 kulan kadib ayuu helay goolkiisa koowad ee Barcelona.
Neymar waxaa uu ka daqiiqadooyin badanyahay ALCÁCER , maxaa yeelay Neymar waxaa uu gool la’aan yahay 796 daqiiqo, wax gool ah ma dhalin 8 kulan oo La Liga ah, waxaa ugu dambeeysey kulankii Celta de Vigo inuu Barcelona gool u dhaliyo La Liga.